Navy Blue Corner Sofa ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
Raha resaka sofas no resahina, safidy tsy manam-petra no hiteraka ao an-tsainao mifototra amin'ny habeny, fomba, ara-nofo, asa tanana, sy ny hafa. Betsaka ny fomba tsy azonao an-tsaina ny fiatrehana karazany maro. Na izany aza, Ireo zavatra telo fototra izay manapa-kevitra amin'ny fomba sofa. Anisan'izany ny sandry, indray, sy ny tongotry ny sofa, na inona na inona sofa sofa zoro manga. Ankoatra ny lamosina, fitaovam-piadiana, zipo, seza, sns, misy famaritana bebe kokoa omena ny fandinihana momba ny sofa velvetana volon-dranomasina. Misy karazany maro ny fomba kilasika sy ankafizinao, izay ny fomba dimy malaza indrindra dia ny fizarana, natory, nentim-paharazana, seza fitiavana, ary chaise.
Ny fomba fizarana dia apetraka amin'ny fomba maro. Ohatra, L-endrika ho an'ny zoron'ny efitrano, fizarana fizarana misaraka amin'ny faritra misy fipetrahana misaraka mamela ny sofa ho famerenana miorina amin'ny isan'ny vahiny tonga hitsidika. Ny karazany faha-2 dia ny torimaso izay natao miaraka amina fiasa roa. Izy io dia mety ho seza mandritra ny andro, ny mifanohitra amin'izay no tsy alina, rehefa alaina ny sofa dia mivoaka fandriana mivalona.
Avy eo hiresaka momba ilay seza fitiavana lehibe indrindra isika, seza zorony manga an-dranomasina izay nanjary malaza ankehitriny. Ny laza dia mety vokatry ny fitakiana ny habaka ambany kokoa amin'ny efitrano kely. afa-tsy, ny velaran'ny sezarana dia vita amin'ny lamba volory vita volo izay manome ilay eo amin'ny sofa fahatsapana mafana sy malefaka. Mampandanjalanja tanteraka ny sandry cambered ny felam-boninkazo sy ny lamosina miraviravy, ataovy izay hamenoan'ny fianakaviana fiononana rehetra.
Type: Fitaovana sofa any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny; Hotel Suite; Trano fandraisam-bahiny
Material: hoditra; Lamba; Tongotra Arcylicl; Rafitra anaty hazo; Sombin-javatra avo lenta
Anaran'ny vokatra: Navy Blue Corner Sofera
asa: Fehizoro zoro boribory
lafiny(cm): 789/413L * 104W * 78 / 86H; Habe namboarina
Haben'ny fonosana(cm): 794L * 109W * 83H
Q: Inona ny serivisinao aorian'ny fivarotana?
A: Eny, manana loko marobe isafidianana ireo fitaovana isan-karazany toy ny hoditra voamaina Top, PVC, mety, na lamba.